Iwo Magical Mawere eMoher | Kufamba Nhau
Mariela Carril | | Ireland, Chii chekuona
ari Cliff of moher Ivo ndeimwe yezvishamiso zvevashanyi veIreland uye hongu, ivo mashiripiti. Kutemwa nekukurumidza kwepasi mukusangana kwayo negungwa nematenga zvinoshamisa. Unovaziva iwe pachako here? Kwete? Ipapo vanogona kuve nzvimbo yakanaka kwazvo, kunyangwe munguva yechando kana kutonhora nemhepo zvikasakutyisa.
Ireland Haisi kure saka kana iwe uchida zano pano tinokusiira ruzivo nezve mawere uye maitiro ekuita iyo kushanya kwevashanyi pasina kurasikirwa neakanakisa acho. Kufamba kuverenga!
1 Mawere aMoher
2 Shanyira mawere eMoher
Ivo vari munzvimbo inozivikanwa yeiyo Burren, mudunhu clare, Republic yeIreland. Iwo akaumbwa akatenderedza makore mazana matatu emamirioni apfuura uye ari anowanzo kuve matombo ematombo, kunyangwe aya matombo ekaresa eese ari pazasi.
Pakati pekutsemuka mumatombo kunorarama kupfuura Shiri zviuru makumi matatu, chimwe chinhu senge makumi maviri emarudzi akasiyana, uye patsoka dzavo, mugungwa, mune ma dolphin, shark neshumba dzegungwa. Vanofamba anenge makiromita gumi nemana uye panzvimbo yepamusoro pavanosvika 214 metres kumusoro, muOrien Tower. Kune rimwe divi ivo vari 120 metres kumusoro, pane imwe nzvimbo inozivikanwa saHag's Head.
Kubva kumusoro kweO O'Brien Tower unogona kuona Aran Islands, iyo Twelve Pines makomo kana Galway Bay, uye nehukuru hwayo uye ayo akanaka maonero ndeekuti vanopfuura mamirioni evashanyi anovashanyira pagore. Iva mumwe wavo!
Mawere chikamu che Geopark kubva kuBurren neCliffs yeMoher uye yakakosha pane imwe yemigwagwa inozivikanwa uye yakanaka yevashanyi iyo Ireland inofanira kupa, iyo Wild Atlantic Way.
Shanyira mawere eMoher
Mawere aigara achishanyirwa nevanhu, asi muma90 hurumende yakatanga kuitora zvakanyanya uye kuronga kushanya. Neichi chikonzero, uye nepfungwa yekushanya kwechisikigo, pasina zvivakwa zvevanhu zvinokanganisa pakati penyika neruzivo rwedu, chazvino Vashanyi Center mukati merimwe divi regomo, usati wasvika kumawere mamwe chete.
Iwo mabasa akatora makore gumi nemanomwe uye masuo akavhurwa muna Kukadzi 17. Zvakanakisa kushanyira nzvimbo ino usati wabuda kunoongorora mawere nekuti ine inonakidza kuratidzwa kweiyo geology yenzvimbo, maruva, mhuka uye nhoroondo. Kune akakura multimedia skrini, shiri-eziso maonero egungwa, uye mavhidhiyo emapako ausingazomboshanyira nekuti ari pasi pemvura, mujinga memapako.
Kusvika kune ino saiti kuri nyore kubva kumaguta ese nemataundi akatenderedza. Kubva kuGalway, Kinvara, Limerick, Doolin, Ennistymon, Ennis kana Lisdoonvarna unogona kutora bhazi pamutsetse wehurumende Bus Éireann. Kune akati wandei masevhisi pazuva uye kana zvisiri zviripo nguva dzose zvakavanzika mabhazi. Vanhu vazhinji vanogara muDoolin, kuti isvike nyore kumawere, iri maminetsi gumi kutyaira, asi zvakare yetsika yavo yekare yeIrish nenzvimbo dzisingakanganwiki.
Unofanira kushanyira riini mawere eMoher? Zvakanaka, ndeimwe yezvakanakisa muIreland saka muzviteshi zvinonakidza kwazvo pane vanhu vazhinji. Ndosaka ndati kana kutonhora kana mhepo zvikasakutyisa, unogona kuzvikurudzira kuti uvashanyire munguva yechando.
Kuratidzwa kubva kuDublin kana kuGalway, maguta maviri makuru, (Dublin iri maawa matatu kure uye Galway iri maminetsi makumi mapfumbamwe kubva kure), inosvika pakati pa90am na11 pm kuitira kuti nguva yenguva ive yakaoma kunzwisisa. Kana iwe ukaenda wega, zvirinani kuenda mangwanani-ngwanani kana pakati pehusiku. Kunyura kwezuva kwakanaka!
Vashanyi vashanyi vanofamba kureba kwese kumawere uye vanowanzo gara pakatikati, ndiko kuti, padyo ne O'Brien Tower uye padyo nechikamu chemadziro. Kana usingaendi sechikamu cherwendo une nguva yakawanda kuti ugone kufamba zvakanyanya, zvinova zvakanaka nekuti wakasara wega. Uye zvakare, iwe unogona kusaina ku kukwira chikepe nechigadziko chayo kana pa Gungwa Mugwagwa Makiromita gumi nemaviri pamusoro pemakomo.
Iyo Coastal Trail inotanga muDoolin uye inosvika kwaHag's Head ichipa nzvimbo dzakanakisa: mawere, matenga, mapopoma emvura, masango kwese kwese, pasina mota. Iwe unogona kuzviita iwe wega kana kusaina kune imwe ine gwara. Panyaya iyi pane murimi wemuno anonzi Pat Sweeney uyo anoronga kufamba mangwanani ega ega na10 am. Iwo ari matatu-maawa kukwira uye kunonakidza kwazvo.
Ndinoyeuchidza kuti hapana kwekurara kumawere pachawo uye kuti guta riri padyo neDoolin uko kupi kwekugara kunosiyana-siyana kunyangwe yakakwenenzverwa kupfuura chero chinhu muBed & Breakfast. Zviripachena, kune mamwe emahotera emahombekombe ane asingakanganwiki maonero.
Kana ukaenda munguva yechando unotofanirwa kusunga asi chokwadi chiripo ndechekuti sezvo iri gungwa unogara uchifanira kuuya nejasi nekuti mamiriro ekunze anochinja nekukurumidza apa. Dzimwe nguva mashawa akajairika uye akajeka, pfeka shangu dzakasununguka dzisingatsvedza. Kana iwe ukagara padyo neVashanyi Center iwe unogona kunakidzwa neresitorendi yayo uye dzimba dzayo dzekugezera asi kana iwe ukafamba wega, edza kuva nezvaunoda newe.
Kune fenzi yematanda inopatsanura nzvimbo yeruzhinji kubva kumapurazi akazvimirira asi unogona kuipfuura nekutevera nzira, kunyangwe ndichikuyambira kuti mugwagwa hausisina kuchengetedzwa zvakanyanya. Uye chekupedzisira, maizviziva here kune vanhu vanoroora pano? Zvakanaka, muDoolin, mune yakanaka, yakanaka imba ine maonero egungwa, asi mushure meizvozvo vaviri vacho vanofamba vanokwira kumawere uye vanotora mifananidzo inonakidza seiyi iri pamusoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Getaways Europe » Ireland » Iwo emashiripiti mawere eMoher